कोरोनाबाट बच्ने हो ? त्यसो भए यसो गर्नुस् – Jagaran Nepal
कोरोनाबाट बच्ने हो ? त्यसो भए यसो गर्नुस्
काठमाण्डु, ८ भदौ– कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिन के गर्नुपर्ला ? घरबाट बाहिर ननिस्कनु नै अन्तिम विकल्प हो त ? कोरोना सङ्क्रमणबाट निको भएका तथा चिकित्सकहरू सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे पुग्ने बताउँछन् ।
बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालबाट निको भएर फर्किएकी एक महिला भने स्वास्थ्य सुरक्षामा हेलचेक्र्याइँ नगर्नु नै कोरोनाबाट जोगिने अन्तिम विकल्प भएको अनुभव सुनाउँछिन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने घर नजिकैको किराना व्यापारीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि ती महिला पनि श्रीमानसहित स्वाब परीक्षणका लागि टेकु पुगिन् तर श्रीमानकाे रिपोर्ट नेगेटिभ आयो ।
घरमा कोही आउँदा पनि उनका श्रीमान मास्क लगाएर कुरा गर्थे । ती महिलाको भनाइअनुसार मास्क खोलेर कुरा गर्नुभन्दा उनी चाहिँ जोखिमको बेला सतर्क हुनुपर्छ भन्छिन् । कोरोना सङ्क्रमण हुन नदिन सामान्य सतर्कता अपनाउँदा एक दम्पतीका श्रीमान् जोगिनु तर श्रीमतीमा देखिनु शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता (इम्युनिटी पावर) मात्र नभई स्वास्थ्य सतर्कता महत्त्वपूर्ण भएको पाइएको छ ।